An-jatony maro ireo vehivavy teto Utah no namaly ny antso. Na dia tao anatin’ ny fahantrany aza izy ireo dia nameno ireo sarety tamin’ ny zavatra izay azony nangonina sy ireo zavatra rehetra azon’izy ireo nangonina avy tany amin’ny hafa mba hanampiana ireo tao anatin’ ny fahasahiranana. Nanoratra toy izao ny iray tamin’ ireo rahavavy mahery fo ireo: “Tsy mbola nahatsapa fahafahampo, na azoko lazaina hoe, fahafinaretana toy izany tany amin’izay mety ho asa efa nataoko teo amin’ ny fiainako aho, satria tena misy ny firaisan-kina toy izany.”3
Rehefa vita ny famonjena ary nitsonika ireo ranomandry dia nanoratra ity fanontaniana avy amin’ilay fony feno fahatokiana io rahavavy io: “Inona indray ny zavatra manaraka azon’ireo vonona ny hanao asa ho atao?”4
Amin’ izao androntsika izao dia vondron’ ny rahavavy mahery fo maro manerana ny tany no maneho ny finoany amin’ny alalan’ny asa any amin’ ny toerana an-jatony maro. Ary dia manontany ao am-pony sy ao anatin’ny vavaka izany fanontaniana izany ihany koa izy ireo izay mikasika ny hoavin’ny fiainam-panompoany.
Miaina toe-javatra miavaka ianareo tsirairay ao anatin’ilay dianareo mankany amin’ ny fiainana mandrakizay. Manana traikefa an-taonany maro ny sasany, raha vao manomboka eo amin’ ny dian’ ny maha-mpianatra azy eto an-tany kosa ny hafa. Samy manana ny tantarany sy ny olany manokana ny tsirairay. Kanefa ianareo rehetra dia rahavavy sy zanakavavy malalan’ ny Raintsika any an-danitra, izay mahafantatra sy miahy anareo tsirairay avy.
Ny zavatra miavaka izay niarahanareo nanao dia ny mifankatia, mifampiahy ary mifankahery. Nanatri-maso izany fahagagana mifono zavatra telo izany aho vao iray volana monja izay tamin’ ny alalan’ny fanompoana nataonareo ho an’ ny rahavavy iray. Amin’ ny maha-rain’ izany rahavavy izany ahy dia misaotra anareo aho ary te-haneho koa aho fisaorana ilay Andriamanitra izay nitarika ny mpamangy isan-tokantrano iray.
Tao an-trano ny zanakay vavy Elizabeth sy ny zanany vavy telo taona, izay mipetraka any amin’ ny faritany hafa ary lavitra anay. Vao nanomboka ny herinandrony voalohany nanatrika ny sekolin’ny zaza madinika ny zanany iray hafa. Bevohoka enim-bolana i Elizabeth, ary miandry ny fahaterahan’ ny zanany fahatelo, izay mbola ho vavy ihany koa araka ny nolazain’ ny mpitsabo. Tany am-piasana ny vadiny, Joshua, tamin’ izay.
Rehefa nahita izy fa nandeha rà ary nitombo ny fandehanan’izany dia niantso an-tariby ny vadiny izy. Nasain’ny vadiny niantso fiaravonjimarary izy ary dia hovonjeny any amin’ny hôpitaly avy eo, izay 20 minitra miala ny tranony. Naheno olona nandondona tao am-baravarany izy raha mbola tsy nahavita niantso akory.
Gaga izy raha nahita ny namany mpanao famangiana isan-tokantrano miaraka aminy ao amin’ny Fikambanana Ifanampiana. Tsy nanana fotoana izy ireo tamin’ izay maraina izay. Nahatsapa fotsiny ilay namany fa tokony handalo hitsidika an’i Elizabeth.
Nampiany hiditra ny fiarany izy. Tonga tany amin’ ny hôpitaly minitra vitsy talohan’ ny nahatongavan’ i Joshua avy any am-piasany izy ireo. Nanapa-kevitra tao anatin’ ny 20 minitra latsaka ilay mpitsabo fa hamoaka ilay zaza amin’ny alalan’ny fandidiana mba hanavotana ny ain’ i Elizabeth sy ny an’ny zanany. Ka dia tonga teto an-tany ilay zazavavy kely izay nitomany mafy ary teraka 15 herinandro mialohan’ ny fotoana. Nilanja 765 g izy. Fa dia velona soa aman-tsara izy, ary toy izany koa i Elizabeth.
Tanteraka ny ampahan’ny tenin’ i Lucy Mack Smith tamin’ izay andro izay. Niahy, nitia ary nankahery ny rahavaviny ao amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra ny rahavavy mpikamban’ ny Fikambanana Ifanampiana mahatoky iray, rehefa nobitsihin’ ny Fanahy Masina. Tsy mahazo fotsiny ny fisaoran’ ireo izay nampian’ izy ireo sy ny fisaoran’ireo olon-tiany izany vehivavy izany sy ireo an’ arivony hafa izay nanao asa fanompoana tena lehibe toy izany nandritra ny fotoana maro nifandimby fa mahazo fisaorana avy amin’ ny Tompo koa.
Tsaroanareo angamba ny teny fankasitrahany ho an’ ireo izay mandray fankasitrahana kely noho ny asa an-tsitrapo nataon’izy ireo: “Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ ny anankiray amin’ ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.”5
Kanefa mitombo be dia be ilay fahagagana hoe rahavavin’ny Fikambanana Ifanampiana iray tonga hanampy amin’ny fotoana tena ilana azy amin’ ny alalan’ ny herin’ ilay vondron’ ny rahavavy miray hina. Ity ny ampahany ihany amin’ny hafatra nomen’ ny evekan’ i Elizabeth azy sy i Joshua tany amin’ ny hôpitaly ora maromaro taorian’ ny nahaterahan’ ilay zaza: “Voafehin’ ny filohan’ ny Fikambanana Ifanampiana ny zava-drehetra. Mandrindra lamina ho an’ny hoavy sahady izahay mba hanampiana ny zanakareo vavy any an-trano ka ho afaka hivezivezy any amin’ny hôpitaly i Elizabeth raha mbola mijanona any ilay zazakely mahafatifaty mbola tsy manana anarana. Efa nanao toy izany izahay taloha, nandritra ny fotoana naharitra, ary dia nanao izany tamim-pahazotoana tokoa ireo olon[tsika].
Hoy ilay eveka nanohy ny teniny, raha niresaka mikasika ny tenany sy ny paroasy: “Nandeha hatrany amin’ ny hôpitaly mihitsy aza izahay ary nijanona niaraka tamin’ ireo ankizy tao amin’ ny efitrano filalaovana rehefa tsy tian’ ny reniny ho apetraka any amin’ ny toerana hafa izy ireo.
Ary hoy izy avy eo hoe: “Tsy hanao izany anefa izahay raha tsy efa nifampiraharaha sy nahazo lalana avy aminareo. Tianay fotsiny ianareo mba tsy hiahiahy amin’ny zavatra izay afaka sy [azonay] atao.”
Ny zavatra nataon’ izy ireo tamin�